ब्रान्ड पूर्णता बनाम सामग्री गति | Martech Zone
आइतबार, अगस्त 19, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
त्यहाँ एक चुनौती छ जुन अहिले अपा .्ग संगठनहरू छ। यो हो गति। मार्केटिंग विभागहरू जो चुस्त रहन्छन् र सामग्रीलाई द्रुत गतिमा धकेल्दछन् फल्छन्। मार्केटिंग विभागहरू जुन ब्रान्ड पूर्णताले पक्षाघात भएको छ विफल भइरहेको छ। यो कछुवा र खारा को पुरानो उखान हो।
कछुवा जहिले पनि जित्थे। स्पष्ट, उत्तम सन्देश र चित्रण को शिल्पबद्ध कम्पनहरु यो लगातार शीर्ष मा बनायो। एक ठोस ब्रान्ड बिना कम्पनिहरु पछाडि छोडिनेछ ... अविश्वसनीय र कसैको ध्यान नदेखी पूर्ण ब्रान्डले स्पटलाइट र तिनीहरूको सम्भावनाको चासो चोरेको छ।
बजार विकसित भएको छ, यद्यपि, र अब ग्राहकहरू सञ्चार र आफ्नो अर्को खरीद अनुसन्धान, ब्रान्डलाई धेरै थोरै सूचना (वा क्रेडिट) दिएर। तिनीहरू, यसको सट्टामा साथीहरू र परिवारबाट सल्लाह लिन्छन्, अपरिचितहरूको समीक्षा गर्छन्, र भ्वाइस मेल वा ईमेलमा निर्देशित गर्नुको सट्टा कम्पनीसँग कुराकानी खोल्न चाहन्छन्। तिनीहरू उत्तरहरू चाहन्छन्, सुन्दर लोगो, वेबसाइट, विज्ञापन र नारा होइन।
दौडहरू छोटो छन् र भालेहरू अब जित्दैछ। अपूर्ण ब्रान्डहरू समर्थित छन् - र यी दिनहरूमा फस्टाउन पनि सकिन्छ - यदि तिनीहरूको कम्पनीले मूल्य र अन्तर्दृष्टिको साथ संभावनाहरू प्रदान गर्दै छ। एक लोगो, एक नारा र एक राम्रो उत्पाद आजकल जनता लाई आकर्षित गर्न पर्याप्त छैन। यसको सट्टा, मार्गदर्शन र नेतृत्व प्रदान गर्ने टोलीको उत्पादन भन्दा बढि मूल्यवान छ।
त्यसोभए कुन हो? ब्रान्ड पूर्णताको कछुवा वा सामग्री गतिको खण्ड जो दौडमा विजयी हुन्छ?
मलाई लाग्छ कि घोडा कछुवा बाहिर आउँदैछ। ब्रान्डहरू तपाईंको समग्र रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तर जब त्यो ब्रान्डको पूर्णता वास्तवमा चाहनेहरूसँग कुराकानी गर्ने तपाईंको क्षमतालाई रोकिरहेको छ र त्यसो गर्न पर्खिरहेको छ, तपाईं आफ्नो बजारको अपेक्षाहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्न। बजार माग गर्दछ कि तपाइँ उनीहरूसँग बारम्बार कुराकानी गर्नुहोस् मान प्रदान गर्नका लागि।
बजार पूर्णता खोजीरहेको छैन, उत्तरहरूको खोजी गर्दैछ। ठूला ब्रान्डहरू अझै फस्टाउन सक्छन्, तर जबसम्म तिनीहरूले खर्राको चपलता अपनाउँदैनन्। ह्यारसले व्यापारको एक टन ड्राइभ गर्न सक्दछ ... तर तिनीहरू अझै पनि समय मा आफ्नो ब्रान्ड सही गर्न आवश्यक छ।
ब्रान्ड ओभर स्पीडका केहि उदाहरणहरू:
कम्पनीहरु जो महीनाहरु को लागी एक इन्फोग्राफिक डिजाइन मा डाल प्रत्येक विवरण tweak। इन्फोग्राफिक्स को आधार मा साझा गरीन्छ दुबै डिजाइन र डाटा। प्रत्येक इन्फोग्राफिक भाइरल हुन गइरहेको छैन। त्यहाँ इन्फोग्राफिक प्राप्त गर्नुहोस्, परिणामबाट सिक्नुहोस्, र अर्को डिजाईन सुरु गर्नुहोस्। आधा दर्जन इन्फोग्राफिकहरू बजारमा पुग्न जुन राम्रो देखिन्छ त्यहाँ कुनै पनि बाहिर नहुनु भन्दा राम्रो हो।
कम्पनीहरूले यथार्थ कुरा भन्न को लागी चिन्तित छन् कि तिनीहरू तथ्यलाई वेवास्ता गर्छन् कि पाठकले सबै कथा खोजिरहेको छैन। तिनीहरूको समस्या छ र तिनीहरू यसलाई मिलाउन केहि खोज्दैछन्। यदि तपाईंले यसलाई ठीक गर्नुभयो भने, तिनीहरूले खरीद गर्नेछन्। यदि तपाईंसँग सबै कथाहरू छन् भने, तपाईं उत्तर तिनीहरूसँग व्यवसाय हराउन लाग्नुहुनेछ।
जानाजानी क्रिप्पी वेबसाइट भएका कम्पनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेको छैन, नयाँ वेबसाइटको प्रकाशनमा ट्रिगर तान्न हिचकिचाउँदो छ जुन उत्तम छ… तर उत्तम छैन। यो गजबको छ कि तपाईं खजाना डिजाइन गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर अहिल्यै तपाईंलाई काम गर्नको लागि केहि आवश्यक छ। यसलाई काममा लिनुहोस्, जानुहुँदा सुधार गर्नुहोस्।
कम्पनीहरूले प्राय गतिको बारेमा चिन्ता गर्दैनन् किनभने उनीहरूसँग मापनको थोरै साधनहरू छन् राजस्व तिनीहरूले गुमाइरहेका छन्। जब हामी कम्पनीहरूसँग काम गर्छौं तिनीहरूलाई धूर्तताका साथ धकेल्न, हामी प्राय जसो रुकावट मानिसहरूमा निराश हुन्छौं, विशेष गरी पूर्णतामा आधारित, प्रत्यक्ष हुनु अघि। एक पटक हामी लाइभ भए पनि यद्यपि कम्पनी प्रायः फिर्ता आउँदछ र भन्छ ... म चाहन्छु कि हामीले यस महिना अघि गरेको थियौं।
म तपाईंको ब्रान्ड त्यागको लागि वकालत गरिरहेको छैन। म गति र ब्राण्डको बीचमा सम्झौताको वकालत गर्दैछु ताकि तपाईको समग्र मार्केटिंग प्रयास सुधार गर्न तपाई दुबै लाई अधिकतम र लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।
टैग: ब्रान्डसामग्री मार्केटिङसामाजिक संजालगतिरणनीति
वेबसाइट पहिलो प्रभावहरू